Hero Ball Z တွင်သင်၏သူရဲကောင်းအားကူညီရန်ယူနစ်များကိုပေါင်းစည်းပါ Androidsis
Hero Ball Z တွင်သင်၏သူရဲကောင်းများကိုကူညီရန်တူညီသောအဆင့်ရှိယူနစ်များကိုပေါင်းစည်းပါ
Hero Ball Z သည် RPG ဂိမ်းတစ်ခု ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ယူနစ်များကိုပေါင်းစပ်ရန်လိုအပ်သည် သူတို့ကိုပိုပြီးအစွမ်းထက်စေရန်တူညီသောအဆင့်၏။ ဒီအမျိုးအစားအတွက်ဂိမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သူတစ်ယောက်ကဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းလျှောက်ရမယ့်အချိန်ပဲ။
သင်အနည်းဆုံးသူ့ကိုတ ဦး တည်းပေးလျှင်အထူးသဖြင့်လျှင် ဒီဂိမ်းအမျိုးအစားကိုမှလှည့်ကွက် ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်နိုင်မည့်နှစ်ချက်သောခလုတ်များဖြင့်၎င်းတို့ကိုပေါင်းရန်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအပေါ်တစ်ခုသယ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။ ထို့အပြင်ဤအမြင်အာရုံအလွန်မန်ဂါးခရီးဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူဤခရီးတွင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူလိုက်ပါမည့်သူရဲကောင်းများလည်းရှိသည်။ လုပ်သာလုပ်။
2 Hero Ball Z တွင်သင်၏သူရဲကောင်းများနှင့်အခြားအရာများကိုအဆင့်မြှင့်ပါ
3 Freemium သန့်စင်သော
အဲဒီလို အမြင်အာရုံထိတွေ့ manga Hero Ball Z သည်ရုပ်ပုံများသည်အလွန်အရေးကြီးသည့်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကောင်းပြီ၊ ကျွန်တော်တို့ကဂိမ်းတွေကိုဘယ်အချိန်မှာစတယ်ဆိုတာကိုပြပြီးအဲဒီယူနစ်တွေကိုထုတ်လုပ်နေတယ်ဆိုတာက“ ဆင့်” ဒါမှမဟုတ်အဆင့်မှာတိုးတက်အောင်ပေါင်းစည်းတော့မယ်ဆိုတာပြတယ်။
ဒီဂိမ်းရဲ့အခြေခံကဘယ်မှာလဲ သူတို့အားယူနစ်သူရဲကောင်းများဖြည့်ပါလိမ့်မယ် ကျွန်တော်တို့တိုးတက်လာသည်နှင့်သော့ဖွင့်တော့မည်ဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားယူနစ်များကိုပေါင်းစည်းနေစဉ်၎င်းတို့အားတိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့်ရည်မှန်းချက်ထားခြင်းရှိသည့်ဂိမ်းအမျိုးအစားသို့ ဦး တည်သွားစေလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
အနည်းဆုံးဒီမှာသူတို့ဟာရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့တခြားခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ကွဲပြားတယ် အဲဒီ bug တွေကိုတိုးဖို့ကြိုးစားရမယ် သို့မဟုတ်ဖုတ်ကောင်; ကျွန်တော်ဒီဂိမ်းအမျိုးအစားများကိုမှ themes များအပေါငျးတို့သရှိသည်သောအမှန်တရား။ ဒါကြောင့် Hero Ball Z မှာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့ arcade tone ရှိပြီးပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ကနေသင်ခန်းစာတစ်ခုခုကိုသွားစရာမလိုဘဲကျွန်တော်တို့ကိုဂိမ်းထဲကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။ ပထမပြောင်းလဲမှုတွင် ၀ န်ထမ်းများကိုမကြောက်ရွံ့ရန်သတိပြုသင့်သောအရာ။
Hero Ball Z တွင်သင်၏သူရဲကောင်းများနှင့်အခြားအရာများကိုအဆင့်မြှင့်ပါ
Hero Ball Z အကြောင်းနောက်ထပ်ပျော်ရွှင်စရာတစ်ခုကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူနစ်တိုးတက်စေရန်စနစ်နှစ်ခုလုံးကိုတိုးတက်စေသည် တိုက်ခိုက်ရေးစာရင်းဇယားတိုးတက်လိမ့်မည်ဟုသူရဲကောင်းများသူတို့ကိုယ်သူတို့အဖြစ်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့အားမည်သို့သောတိုးတက်မှုမျိုးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ရန်နိုးနိုးကြားကြားရှိရမည်။
ကျနော်တို့တိုးတက်စေနိုင်ပါတယ် ပိုမိုမြင့်မားသောအဆင့်သို့သွားရန်ယူနစ်မျိုးဆက် သို့မဟုတ်သူတို့ပိုမိုမြန်ဆန်စွာထုတ်လုပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်း။ ဤရှုထောင့်သည် Hero Ball Z အားကစားစရာများစွာပေးပြီးဇာတ်ကောင်ဒီဇိုင်းက၎င်းကို၎င်း၏ချစ်စရာကောင်းသည့်ဇာတ်ကောင်များသယ်ဆောင်သွားမည့်အနိုင်ရအတွေ့အကြုံကို ဦး ဆောင်စေသည်။
ငါတို့သည် သူရဲကောင်းလေးမျိုး ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့သူကိုတိုးတက်အောင်လုပ်မလဲဆိုတာကိုစမ်းကြည့်ဖို့လိုတယ်၊ ပထမတော့တခြားဂိမ်းတွေနဲ့ဆင်တူပေမယ့်မျှော်လင့်ထားတာထက်ပိုပြီးနက်ရှိုင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုစုပ်ယူဖို့လိုတယ်။
အရာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကို ဦး ဆောင်လမ်းပြ မိမိအ freemium အမှုအရာနှင့်အတူတစ် ဦး freemium မတိုင်မီ သူတို့အား loot box များကဲ့သို့ငါတို့သည်လည်းတူညီချဉ်းကပ်နိုင်သည့် om nom အဘယ်သူသည်ဤဂိမ်းမျိုးသို့တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအပိုင်းများ၌လှပသောသရုပ်ဖော်ပုံများကိုဆက်လက်ခံစားရန်နှင့်အာရှစတိုင်လ်အတွက်ကစားစရာများစွာနှင့်အတူလမ်းကြောင်းသစ်တစ်ခုဖြစ်သည် Crossing Void အဖြစ်.
အမြင်အာရုံကအတော်လေးပြောင်းလဲနေသောဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်နှစ်ချက်နှိပ်ခြင်းဖြင့်စတင်ချိန်တွင်၎င်းတို့အားတိုးတက်စေရန်ယူနစ်များကိုပေါင်းစည်းရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏သရုပ်ဖော်ပုံများနှင့်ခေတ်မီသောအာရှထိတွေ့မှုအတွက်များစွာအနိုင်ရသောဂိမ်းတစ်ခု။ ၎င်းသည်စပိန်ဘာသာမဟုတ်သောကြောင့်သင်အမှန်တကယ်လိုအပ်သောအရာများမလိုအပ်သော်လည်း၎င်းကိုအသုံးပြုပါ။
Hero Ball Z သည်အခမဲ့ဂိမ်းဖြစ်သည် ဒါကသင့်ကိုဒီလောက်ထူးဆန်းတဲ့ manga touch ကိုခေါ်ဆောင်သွားပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းဖုန်းများမှကစားခြင်းသည်ခေတ်မီသည်။ Hero Ball Z. ကစားရန်ဤဇာတ်ကောင်များမတိုင်မီသင့်ကိုယ်သင်ပြင်ဆင်ပါ။
အလွန် hackneyed သောအမျိုးအစားအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုဖြစ်ဖို့ကြိုးစားပါ။ သူကသူ့လက်တွေအများကြီးကိုပစ်လိုက်ပြီးဂိမ်းရဲ့ဒိုင်းနမစ်ကိုဖန်သားပြင်ပေါ်မှာထိတွေ့မှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်။
ရေးသားသူ: JOYCITY ကော်ပိုရေးရှင်း
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ဂိမ်းများ » Hero Ball Z တွင်သင်၏သူရဲကောင်းများကိုကူညီရန်တူညီသောအဆင့်ရှိယူနစ်များကိုပေါင်းစည်းပါ
သင်၏ Xiaomi ဖုန်းတွင်လျှို့ဝှက်မှတ်စုများကိုဖန်တီးနည်း